श्रीमती अरुसग लागेको यसरी पत्ता लगाउनुहोस::देश र जनताप्रति समर्पित
श्रीमती अरुसग लागेको यसरी पत्ता लगाउनुहोस
तपाईंले आफ्नी श्रीमतीको विभिन्न क्रियाकलापबाट उसले धोका दिएको या नदिएको थाहा पाउन सक्नुहुन्छ ।
सबैभन्दा पहिलो हो फोन कल:
तपाईंको श्रीमती फोनमा कत्तिको झुन्डिन्छिन् ? तपाईँको अगाडि फोन आउँदा उनको हाउभाउमा कुनै परिवर्तन आउँछ कि आउँदैन ? बारम्बर फोन आइरहने फोन, स्वरको परिवर्तन, मेसेज गर्ने प्रवृत्तिहरुले पनि तपाईंले श्रीमतीले दिइरहेको छ या छैन भनेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ । फोन आएको बेला आवाज कम गर्ने, अकस्मात् बोल्ने शैलीमा परिवर्तन गर्छिन भने सम्झिनुस, उनको नियत ठीक छैन । थाहै नपाई तपाईमाथि धोका भइरहेको हुन सक्छ ।
केटी साथीहरुसँग घुलमिल:
उनका केटी साथी कति छन् ? केटी साथीसँग पहिलेको भन्दा बढी समय बिताउँछिन कि बिताउन्नन ? कतै केटी साथीलाई भेटन जाने भनेर अरु कसैलाई भेट्न त गएकी छैनन् ? केही समयअघिसम्म बेलुकी अरुसँग समय नबिताउने तपाईंको श्रीमती एकाएक धेरैजसो समय बाहिर नै बिताउने गर्न थाल्छिन् भने तपाईंमाथि धोका भइरहेको हुनसक्छ । तपाईंकी श्रीमती केटी साथीहरुसँग नभई अरु कुनै मानिससँग समय बिताइरहेको हुनसक्छ ।
नुहाउने र जीम:
विगतमा दिउँसो नुहाउने काम नगर्ने तपाईंकी श्रीमती घर फर्कने बेला नुहाएर आएको जस्तो देखिन्छिन् ? के उनी पहिलाको भन्दा जीममा बढी धाउने गर्दछिन् ? सम्झिनुस् त्यहाँ पनि तपाईंलाई गुमराहमा राखिएको हुनसक्छ ।
कतै तपाईंको श्रीमतीले तपाईंलाई झारा टार्ने गरी सेक्समा साथ मात्रै त दिएकी छैनन् ? के उनको सेक्स प्रतिको रुची पहिलाको भन्दा कम छ ? के उनले तपाईंले कहिले नगर्नुभएको तरिकाहरु अपनाउन अनुरोध गर्छिन् अथवा के उनले तपाईंलाई सेक्सका नयाँ तरिकाहरुको बारेमा सिकाउने गर्दछिन् ? त्यसो भए उनीमा शंका गर्ने आधारहरु धेरै हुन्छन् । अर्थात तपाईंमाथि श्रीमतीले धोका दिइरहेकी हुन सक्छिन् ।
श्रीमतीले पहिले र अहिलेमा कत्तिको बास्नादार हुने गर्छिन ? उनीबाट महिलाको भन्दा पुरुषको बास्ना बढी आइरहेको छ ? उनको यो नयाँ बास्ना महिलाको भन्दा पुरुषको बढि हो कि, अथवा त्यस्तै खालको बास्ना आफ्नो कुनै साथीको हो कि त्यो याद राख्नुहोस् ।
पहिला आँखा जुधाएर कुरा गर्ने तपाईंकी श्रीमती अहिले प्रश्नहरु सोध्दा एकाएक यसो गर्न बन्द गरेकी छिन् भने होसियार हुनुहोस् ।
रेशम फिरिरी : ५० वर्ष पुरानो गीत कसरी संसारभरी फैलियो ?
छवि–शिल्पा : विहेमा जन्त जानेदेखि विवाह दर्ता गर्नेसम्मलाई मुद्दा !
पोखराको पुरानो टुडिखेलमा भदौं ११ देखि वाइवाइ तिज मेला पोखरा- “हाम्रो सस्कृती हाम्रो पहिचान लोपउन्मुख सस्कृति जोगाउने हाम्रो अभियान” भन्ने मुल नाराका साथ पोखराको पुरानो टुडिखेलमा वाइवाइ तिज मेला हुने भएको छ । शनिबार...
बरिस्ठ कलाकार सुभद्रा रहिनन् काठमाडौँ – वरिष्ठ कलाकार सुभद्रा अधिकारीको निधन भएको छ । थुप्रै चर्चित नेपाली चलचित्रहरुमा अभिनय गरेकी अधिकारीको शनिबार निधन भएको हो । विक्रम सम्वत् २००३...
बलिउड नायिका ऐश्वर्या रायका ७ ठुला गल्ती विश्व सुन्दरी ऐश्वर्या राय बच्चनलाई बलिउडमा सफल र सुन्दर नायिकाको रुपमा लिइन्छ । साथै, उनी अभिनयमा पनि उत्तिकै पोख्त छिन् । ४० वर्ष नाघिसकेकी...